Yext: Indawo eNye yeNkonzo yokuBalawula bonke Martech Zone
Yext: Indawo eNye yeNkonzo yokuBalawula bonke
NgoLwesithathu, Juni 20, 2012 NgeCawa, ngoSeptemba 8, 2013 Douglas Karr
Ukuba ukhe wazama ukubhalisa ishishini lakho kunye neendawo ezininzi zalapha ekhaya, lixesha elininzi lokuncancisa. Ayisiyo kuphela indawo nganye eneendlela ezahlukeneyo zobhaliso, zonke ziyakuphazamisa kwaye zikubeka kuluhlu lwe-upsell. Sibhalisile kunye neYext namhlanje kwaye sihlawule iphakheji yayo yePowerListings. Ngaphantsi kwe- $ 50 ngenyanga, ikuvumela ukuba ulawule ngaphezulu kweendawo ezingama-30 zoluhlu lwendawo zonke ezivela kwiqonga eliphakathi.
Nasi isikrini solawulo esibonelela ngolwazi lwakho lodweliso:
Kuba umthombo ngamnye unedatha yawo, kukho i-100s yolwazi lwengingqi phaya. Kodwa ingxaki kukuba, banqanyulwe ngokupheleleyo, kwaye ngalo lonke ixesha utshintsho lwedatha, bakhawuleza baphume ngaphandle kokuvumelanisa. Ngapha koko, kwi-avareji, i-6% yoluhlu iyatshintsha inyanga nenyanga, kwaye isiphelo kukuba ngaphezulu kwe-20% yophendlo lwasekhaya lubuyisa ulwazi olungaphelelanga kubasebenzisi. Isiphelo siyadina kumashishini nakubasebenzisi… Yext PowerListings isombulula le ngxaki inkulu ngokubeka iziphumo zokhangelo lwasekhaya kuzo zonke ezo ndawo zinenkqubo enye.
Nasi isikrini sokukhangela apho unokukhangela khona kwaye uqhagamshele uluhlu lwakho lwasekhaya kwindawo nganye:
Kwimizuzu nje engephi, uluhlu lwethu belusebenza kwiindawo ezimbalwa kwaye sifumana izilumkiso nge-imeyile njengoko abanye besiya bukhoma. Ngelixa singalindelanga ukuba nonogumbe omkhulu weshishini njenge-arhente yokukhangela kwendawo, kubalulekile ukuba ishishini lethu lidweliswe ngokuchanekileyo kwaye lifumaneke kuzo zonke ezi ndawo. Ngokukodwa ngokukhula okumangalisayo kweenkonzo ezisekwe kwindawo kwizixhobo eziphathwayo. Sifuna ukufunyanwa ekuhlaleni kanye njengakwilizwe liphela. Ukuba uyishishini lokuthengisa, kunyanzelekile!
Ujongano lulula ukusebenzisa, kwaye luvumela iinkampani ezininzi ezilawula indawo ukuba zilawule iindawo zazo kwifayile ye- Enterprise Inguqulelo. Thatha uvavanyo lweYext ngo ukukhangela ishishini lakho kwiziza zalapha. Enkosi kubahlobo bethu EverEffect ukufumana!
tags: basekuhlaleniUluhlu lwasekhayaUkuThengiswa kweMfono kunye neThebhulethi
I-Offerpop: Ukuphela koLawulo lwePhulo loLuntu
Guqula abaThengi babe ngamaGqwetha ngeZuberance
Juni 20, 2012 ngo-7: 04 PM
Zeziphi iintlobo zeziphumo ozifumeneyo ukuza kuthi ga ngoku?
Juni 20, 2012 ngo-9: 15 PM
Akukabikho iiyure ezingama-24 okwangoku, kodwa iinkonzo ezingama-21 kwezingama-35 zibhalisiwe, zahlaziywa zaza zapapashwa.
Juni 25, 2012 ngo-3: 07 PM
Hayi kakhulu! 😉 Enkosi ngokwabelana.
Juni 21, 2012 ngo-5: 53 PM
Usuku lwe-2 kunye neenkonzo zeendawo ezingama-24 zibhalisiwe, zahlaziywa zaza zapapashwa.
Juni 22, 2012 ngo-10: 04 AM
Ngale ntsasa, ndifumene inqaku lokuba ii-SuperPages zipapashiwe. Enye yezona zinto ziphambili endifuna ukuzibona zihlaziywa!